बाहिरी ब्यानरमा कहिले ? - मनोरञ्जन - नेपाल
बाहिरी ब्यानरमा कहिले ?
श्वेता खड्का अभिनीत कोहिनुर सुपर हिट भयो । तर, धेरैले यसलाई दिवंगत अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठप्रतिको प्रेम र समवेदना भन्ठाने । श्वेता चुप रहिन् । झन्डै तीन वर्ष फिल्मी दुनियाँबाट टाढा रहिन् । अनि, बल्ल बनाइन्, कान्छी । यो फिल्म उनका लागि चुनौतीपूर्ण थियो, कारण कोहिनुर हिट हुँदा सुनिएको गाइँगुइँ चिर्नु जो थियो । त्यसैले प्रमोसनमा दिलो ज्यानले लागिन् । नभन्दै मिश्रित प्रतिक्रया पाए पनि, फिल्मले लोभलाग्दो व्यापार गर्‍यो । सिंगल थिएटर मात्र होइन, मल्टिप्लेक्समा पनि फिल्मले दर्शकको साथ पायो । फिल्म हिट हुनासाथ हिरोइनको व्यस्तता बढ्छ । तर, श्वेताको हकमा त्यस्तो देखिएको छैन । त्यसैले सवाल उठ्न थालेको छ, श्वेताले फिल्म नपाएको कि नखेलेको ? खासगरी बाहिरी ब्यानरका फिल्ममा उनको चासो कम देखिन्छ । कारणचाहिँ श्वेतालाई नै थाहा होला ।
प्रकाशित: जेष्ठ १५, २०७५
बजारु कमेडी (फिल्म समीक्षा : कागजपत्र)
स्वस्तिमाको बेग्लै बाटो
अपरिपक्व प्रयास (फिल्म समीक्षा : द म्यान फ्रम काठमाडौँ)
निरुताको आइटम अवतार
झिनो विषय, रसिलो प्रस्तुति